जापानबाट हिरा लेख्छिन्–‘शालिकरामको हत्या भएकै होइन, यी हुन् बलिया प्रमाण’
दिक्षा पाण्डे (हिरा), जापान
झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको हत्या या आत्महत्या भनेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पुडासैनीले मृत्युपूर्व रेर्कड गरेको भिडियोमा आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भनेर आरोप लगाइएका व्यक्तिहरु प्रहरी हिरासतमा छन् ।
यसै विषयलाई लिएर देश तथा विदेशमा रविको पक्ष तथा विपक्षमा मानिसहरुले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर जापानमा रहेकी हिरा पाण्डेले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै शालिकराम पुडासैनीको हत्या नभएको र आत्महत्या नै हो भनेकी छन् । उनले यसका २ वटा वलिया प्रमाण रहेको सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेकी छन् ।
पाण्डेको विचार जस्ताको तस्तै
‘शालिकराम पुडासैनिको हत्या भएकै होइन, आत्महत्या नै हो । यस्का वलिया प्रमाणहरु २ वटा छन् ।
१-उनले मर्नु भन्दा पहिले ज्वाला संग्रौलालाइ पठाएको म्यासेज हो ।
२-नले मर्नुभन्दा पहिले दोष लगाएकी रुकु अर्थात अस्मिता कार्कीको नाम लिनु ।
यदि कसैले रविलाइ फसाउन हत्या गरेको थियो भने त्यो हत्यारालाइ रुकुको नाम लिन आवश्यक अनि संभव थियो ?
हेर्नुहोस्, तपाइँले, मैले या अरु कसैले पनि वाहिरी आवरणमा अर्थात समाजमा कति चर्चा कमाएको छ, ऊ कति आदर्श छ त्यतातिर ध्यान नदिनुहोस्, उनिहरुको भित्रि जीवन कसैलाइ थाहा हुन्न । शालिकराम पुडासैनीले पनि घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै कुनै केटीसँग सम्वन्ध गाँस्छन् ! हो, यहि भुल उनको मृत्युको कारण देख्छु म । यस्को भित्रि पाटो अनुसन्धानमा आउनु पर्छ ! शालिकराम आँफैमा एउटा राम्रो संचारकर्मी हुन्, उनले रविको टिममा गएर मेहनत गरे ! भने जति पैसा नपाएर भित्रभित्रै पाकेका रहेछन्, रवि र ट्वान्टि फोर विरुद्ध वोल्ने ह्याउ पनि नहुने, वोले दलाल र गद्दारको आरोप लाएर उल्टो मर्नु न वाँच्नु हुने देखे, उता अष्ट्रेलियाको केसमा पनि वुढि दुर्घटनामा मरेकी हो भनेर रुकुलाइ धेरै समय ढाँटेका रहेछन् । पछि वास्तविकता थाहा पाएपछि ति केटीले गालि वेइज्यति गर्नु स्वभाविक पनि हो ।
सायद पुडासैनि अष्ट्रेलिया जाने निहुँमा ति लेडिज सँग वढि हिमचिम गरे, प्रेममा पनि परे, पछि केटीले वलत्कारको केश हाल्छु भनेपछि र केटीको परिवारले पनि धम्क्याएपछि उनमा नैतिक संकट देखिएको छ ! परिवारमा श्रीमती र वच्चा समेत भएका, समाजमा एउटा चल्तापुर्जा संचारकर्मी सँगै हाइहाइ, तर भित्रभित्र त्यहि हाइहाइको फाइदा पुडासैनीले मज्जाले उठाएका रहेछन् ! यहाँ प्रत्येक हाइहाइ भएकाहरुले, त्यहि हाइहाइको मौका कति उठाएका छन् कस्लाइ के थाहा ? अर्को कुरा, मृतक पुडासैनी रवि लामिछानेसँग वनावटि रुपमा नजिक रहेपनि भित्रभित्रै पारिश्रमिकको असमानता, कामको पेलान आदि कुराले भित्रभित्रै गलेका रहेछन् ! यि नितान्त मनोवैज्ञानिक कुरा हुन । ठूलो रुखको छहारी मान्छेका लागि हितकर भएपनि, वरिपरीका साना तिना रुखका लागि कहिल्यै उभो लाग्न दिन्न ! भएभरको पोषण शोषेर खान्छ ! मान्छेमा पनि त्यहि कुरा लागू हुन्छ ! रवि लामिछानेलाइ यति धेरै चर्चित गराउने पर्दा पछाडी एउटा ठूलो टिम छ ! के त्यो सवै टिम रवि लामिछाने सँग खुसि होलान् ? के त्यहाँ खटाइ अनुसार सवैले वरावर पारिश्रमिक पाएका छन् ? यि कुरा विस्तारै समयसँगै खुल्दै जानेछन् । रविको ठूला माछासँगको मोलमोलाइ चलेको रहेछ र चलिनै रहेको रहेछ भने पनि विस्तारै खुल्दै जानेछ !
तर अहिले सरकार सतर्क हुन जरुरी छ ! रवि लामिछानेलाइ अहिले व्यापक जनसमर्थन छ ! अर्को कुरा–रवि र युवराज कँडेलले टर्चर दिँदैमा मात्रै पुडासैनी मर्ने मनुष्य पक्कै होइनन्, तर केटिको काण्डले उनलाइ दिन सम्म टर्चर दिएको देखिन्छ ! त्यति मेहनत गरेर कमाएको इज्यत छिनभरमै लिलाम हुन्छ भन्ने डर र भय ज्वाला संग्रौलाले सार्वजनिक गरेको म्यासेजको स्क्रिन सटमा देखिन्छ ! यहाँ एउटा होनाहार मान्छे मरेर गएको छ । पुडासैनीका वावुका आँखावाट खसेका आँसु र सँगै कापेको ओठ देख्दा मन भक्कानिएर आउछ ! वाउआमाले लक्का जवान छोरो गुमाएका छन्, श्रीमतीले श्रीमान अनि एउटा अवोध वालकले वाउ गुमाएको छ । मान्छेहरु यसैलाइ मजाक वनाइरहेका छन् । मान्छेले आत्महत्या त्यसै गर्दैन ।
मनमा सानो तिनो चोट पर्दैमा मान्छे मर्दैन । सवै कुराबाट हरेस खाएपछि, अगाडीका सवै वाटाहरु अन्धकार देखेपछि र आफ्नो अस्तित्व अव यो धर्तिमा छैन भन्ने ठानेर मर्ने हो । पुडासैनीले चाहेको भए रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकुका समस्या सजिलै तह लगाउन सक्थे । तर उनले खै किन त्यसरी हरेस खाए कुन्नि ? केटि काण्डमा वदनाम त रवि पनि भएकै हुन् ! गल्तिको पश्ताप गरेर नयाँ तरिकाले सोच्नुको सट्टा अन्तिममा मर्ने निर्णय गरे र मनमा रहेको तुष खोलेर मरे । पुडासैनीले मर्नु अघि यसमा रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु अर्थात अस्मिता कार्कीको प्रष्टै नाम मुछेकाकाले उनीहरुलाइ सरकारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यसमा कोकाहल मच्चाउने भिड भावनामा वगेको मात्रै हो, तर पुडासैनी मरे पनि रवि, कँडेल दोषि करार हुने संभावना म पनि देख्दिन । त्यस्तो नहोस् पनि । पत्रकारलाइ दिनरात काममा पेलाउने तर पैसा नदिनेहरु पनि अव होसियार हुनै पर्छ । मृतक पुडासैनीको परिवारमा परेको अपुरणिय क्षति प्रति गहिरो सहानुभूति ! मृतक प्रति हार्दिक श्रद्दा सुमन !’
सबैले बुझ्नुपर्छ एमसीसीका यी १७ कुरा
१. यो IPS (Indo-Pacific Strategy) अंग हो । २. यो…
डाभोस, ओली र झोली
दक्षिण एसियाका सर्भेमा समावेश भएका देशहरूमा नेपाल पाकिस्तान बाहेक सबै…
मुलुकभरीका स्थानीय सरकारहरूमा लाखौं रूख ढाल्ने पागलपन सवार
एकाध प्रोजेक्ट बन्दैमा वा नबन्दैमा केही फरक पर्दैन
१२ सम्मका पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदै -अनिवार्य विषयबाट गणित हट्यो, गणित हटाइएकोमा विज्ञहरुद्वारा आपत्ति ७ दिन पहिले | संसार न्यूज़
यस्तो छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को ‘दशौं’ संशोधन ५ दिन पहिले | संसार न्यूज़